'Tsy manana namana aho' - zavatra 10 azonao atao raha tsapanao fa io ianao - Fifandraisana
'Tsy manana namana aho' - zavatra 10 azonao atao raha tsapanao fa io ianao
Raha tsy manana olona ianao dia afaka miantso namana tena izy, ny fahatsapana ho irery Mety ho sarotra zakaina, saingy misy zavatra azonao atao hanamboarana ny toe-javatra.
Na mahatsapa ianao fa tsy manana namana mihitsy, na tsy misy namana any am-pianarana, na any amin'ny oniversite, na any am-piasana, tsy tokony hamela ny tenanao hino ianao fa tsy tiana ianao.
Mila mandinika fotsiny ny mety ho antony tsy mbola namanao olona ianao, ary mitady hiteny amin'izy ireo.
Ireto misy torohevitra mahomby 10 hahazoana namana bebe kokoa amin'ny fiainanao.
Fanamarihana: raha tena olona tia olona sy tia fiaraha-monina ianao, saingy niova ny toe-javatra niainanao ary malahelo anao ny hanana namana manodidina anao - angamba nifindra toerana ianao, namela asa hanan-jaza, vao misotro ronono, na zavatra hafa - ny torohevitra ao amin'ny Ity lahatsoratra ity dia mbola misy ifandraisany aminao ary mendrika horaisina an-tsambo.
1. Jereo fa tsy manakana ny finamanana vaovao ianao.
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia misy kisendrasendra tsy ampy namana ary mahatsiaro ho manirery matetika. Ka mety ho hafahafa ny manontany raha tena manakana ny fisakaizana vaovao tsy hiforona ianao.
Mety hanontany ianao hoe: 'Tsy manana namako aho, koa maninona aho no mandeha amin'ny fombako?'
Eny, ny valiny dia mety tsy ho tsapanao akory fa manao azy ianao.
Bibikely saro-pantarina ny saina ary maro amin'ireo zavatra ataontsika no avy amin'ny toerana lavitra ambanin'ny fahatsiarovan-tena. Ataontsika ho azy ireo izany, tsy mieritreritra, ary tsy mandinika izay mety ho fiantraikany eo amin'ny fiainantsika.
Ireo fihetsika ireo, izay miafina aminao, dia mazàna no miforona noho ny olana manokana tsy voavaha.
Tsy mila niaina trauma ara-pihetseham-po na ara-batana lehibe ianao na fanararaotana hitazonana ratra lalina ao an-tsainao.
Ny fisehoan-javatra tsy dia manandanja loatra tamin'ny lasa dia mety hisy fiantraikany amin'ny fisainanao ankehitriny ary hahatonga anao hametraka sakana amin'ny fisakaizana.
Angamba ianao notezaina tao anaty tontolo iray izay namporisika ny fahaleovan-tena sy ny fitehirizan-tena izay midika ankehitriny fa tsy hahatsapa ho afaka hiankina amin'ny olon-kafa na inona na inona ianao - ao anatin'izany ny finamanana na ny fialamboly.
Angamba ianao efa navelan'ny olona taloha ary ezahinao fatratra ny hisorohana izany fahatsapana fery izany tsy hitranga indray. Matahotra ny famadihana sy ny fahadisoam-panantenana ianao, noho izany dia mitazona ny halaviran'ny olona ianao mba hialana amin'ny tena loza mety hitranga.
Mahatsiaro ho tsy mendrika ny sakaizan'ny hafa fotsiny ve ianao satria niaritra fampijaliana sy fanorisorenana nandritra ireo taona nahatanoranao?
Ireo dia ohatra telo fotsiny amin'ny fomba mety hametrahanao vato misakana amin'ny fisainana finamanana misy dikany sy ny antony mety tsy fisian'ny namanao intsony.
Ny finoana ananananao sy ny eritreritra atosok'izy ireo dia mety hanasarotra ny fifandraisan'ny olon-kafa aminao. Anontanio ny tenanao raha mety ho izany no zava-nitranga teo amin'ny fiainanao.
2. Aza manome hafatra diso ny olona.
Matetika ny olona dia misokatra malalaka hanana namana vaovao, saingy tsy maintsy mahatsapa izy ireo fa te-ho olon-kafa ny namana koa.
Izy ireo dia manombana ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny famakiana ireo famantarana alohan'ny hisafidianana raha hanandrana na hanangana fifandraisana amin'izy io na tsia.
Noho izany, mila manontany tena ianao raha manome famantarana tsy mety amin'ireo olona manodidina anao mety ho namana.
Mety hiteny ianao hoe 'Tsy manana namana aho,' fa tsy manasa ny fanasana amin'ny hetsika ara-tsosialy ve ianao? Efa nanao an'izany ve ianao taloha? Raha izany dia tokony ho tsapanao fa tsy ho ela ny olona dia hanontany raha mandà azy hatrany ianao.
Hieritreritra fotsiny izy ireo fa tsy liana ianao na manana zavatra tsara kokoa tokony hatao.
Avy eo dia misy ny fitenin-tenanao sy ny fitaomana azony atao amin'ny olon-kafa.
Raha toa ianao mikatona miaraka amin'ny sandry miampita ary midina, dia tsy feno fahatokisan-tena amin'ny olona ny ho avy hiresaka aminao izany.
Raha toa ianao ka tsy te hirotsaka dia hihazakazaka mazava izy ireo mba hisorohana ny fifaneraserana tsy mendrika eo amin'ny fiaraha-monina na ny fandavana mety ho izy, olombelona ihany koa izy ireo.
Rehefa misy olona miresaka aminao, ahoana ny fandraisanao izany? Tian'ny olona ny resaka mandeha mivantana ary tsy mahatsiaro terena.
Raha manome valiny mahitsy ianao ary manao tsirambina ny fanandramana hanitatra ny fifanakalozan-kevitra, tsy ho ela dia hangataka azy ireo hanao ny veloma ny fahanginana.
3. Mianara fahaiza-manao eo amin'ny fiaraha-monina ary ampiharo matetika.
Raha vantany vao hitanao ny fomba mety hijoroanao amin'ny fisakaizana vaovao dia tsy maintsy alaminao ireo olana hitanao.
Toy ny fahaiza-manao rehetra dia mila mandray fepetra ianao hianarana ny fototry ny fiaraha-miasa ary avy eo manazatra isan'andro mba ho lasa tsara kokoa amin'izany.
Azonao atao ny manomboka kely araka izay itiavanao azy, na dia kely aza raha manao veloma ny tarehy mahazatra anao indray mandeha isan'andro, fa arakaraka ny andramanao matetika no hahitanao ny valiny haingana kokoa.
Tokony misafidy ireo hetsika miatrika ireo faritra manokana nasongadinao tamin'ny dingana voalohany.
Ka raha ny fahaleovantenanao no antony tsy fanananao namana dia tokony manandrana mangataka fanampiana matetika araka izay tratra ianao manomboka amin'ny zavatra madinidinika ary manorena eo.
Raha tsy ekenao ny fisotroana fisotroan-dronono haingana aorian'ny fiasana, maninona raha manontany raha afaka manisy marika miaraka ianao amin'ny manaraka raha hiakatra amin'ny bar ireo mpiara-miasa aminao.
Mila mijanona misotro fisotro iray fotsiny ianao alohan'ny andao, fa hahafantatra azy ireo tsara kokoa ianao amin'ny toe-javatra ara-tsosialy izay hitanao eo amin'ny sehatry ny asa.
Raha tsy tonga aminao ny resaka dia angamba tadidio ny lisitr'ireo tondro fohy azonao ampiasaina raha maina ny fifampiresahana.
Ataovy lohahevitra ankapobeny toy ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny faran'ny herinandro izy ireo na ny tetik'asany amin'ny fialantsasatra manaraka amin'ny kalandrie.
Ny zavatra tsotra toa izao dia mety hanalava ny resaka ary hanangana kofehy voalohany amin'ny fifamatorana eo aminao sy ny iray hafa.
4. Tsy maninona ny isa.
Rehefa tsy manana namana ara-bakiteny ianao dia tsy dia maninona ilay isa azonao atao.Ny namana tokan-tena dia tsara noho ny tsy misy.
Noho izany aza manahy ny amin'ny fanandramana mamorona fifandraisana amin'ireo olona maro samy hafa indray miaraka mifantoka amin'ny isa kely - angamba iray na roa fotsiny - ary avy eo miasà miadana miakatra avy eo.
Raha hitanao fa tsy afaka mitazona namana ianao aorian'ny fanaovana azy ireo dia anontanio raha manaparitaka tena manify loatra ianao amin'ny resaka ora sy saina omenao ny olona.
Zava-dehibe indrindra izany raha vao mihavana amin'ny olona voalohany. Ny fifandraisana sy ny fifandraisana tsy tapaka no mahatonga ny fifamatorana mafy.
5. Jereo mihoatra ireo sakantsakana momba ny taona, ny firazanana, ny saranga ary ny miralenta.
Amin'ny maha olon-dehibe tsy misy namana anao dia mety ho mora ny mieritreritra fa mety hahazo namana amin'ireo olona mitovy taona, fiaviana ara-tsosialy, na lahy na vavy ianao, fa ny tena izy dia tsy dia misy dikany firy amin'ireo zavatra ireo noho ny eritreritrao.
Ny tena zava-dehibe dia ny fahalianana iraisana, ny soatoavina ifampizarana ary ny toetra mifanentana.
Ka aza ferana ny tenanao rehefa mitady namana vaovao dia mihoatra ny sakantsakana izay mampisaraka ny olona sy mahita tontolo iray mety ho naman'izy ireo.
6. Manaova namana amin'ny Internet, fa aza avela ho namanao irery izy ireo.
Ilay eritreritra hoe 'Tsy manana namako aho' dia matetika miaraka amin'ny eritreritra hafa momba ny 'ary tsy haiko hoe aiza no ahitana azy ireo.'
Saingy misy fotoana betsaka azo atao any. Ireto hevitra telo manaraka ireto dia hanome anao ny fomba fahita mahazatra ny olona mihaona sy mahazo namana vaovao.
Miaraka amina forum maro karazana, vondrona Facebook, efitrano fifanakalozan-dresaka, tranokala ary toerana hafa hanaovana fidirana an-tserasera an-tapitrisany, matetika dia mora kokoa ny mahita olona mitovy fisainana amin'ity haino aman-jery nomerika ity.
Tsy zavatra ratsy izany amin'ny lafiny rehetra, ary afaka manampy anao hampihatra ny fahaizanao ara-tsosialy amin'ny tontolo azo antoka, fa aza miankina be loatra amin'ny fisakaizana amin'ity karazana ity.
7. Avadio ho lasa namana vaovao ny filanao.
Ny tombotsoam-piaraha-monina matetika dia vato manorina fiaraha-miombon'antoka iray, ka maninona raha raisina ireo hetsika tianao ankafizinao ary avadiho ho fomba iray ahazoana namana vaovao?
Mampiasà serivisy toa ny meetup.com hahitanao olona / vondrona mitovy hevitra ao amin'ny faritra misy anao ary avy eo manatevin-daharana azy ireo hanaram-po amin'ireo zavatra hitanao fa mahafinaritra.
Tsotra be ity tendrony ity na dia tsy manana namana aza ianao izao dia hanana fiainana ara-tsosialy ao anatin'ny fotoana fohy.
8. Manangana faribolana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampahafantarana namana.
Raha vantany vao nahazo namana iray na roa ianao dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny fatorana anananao amin'izy ireo amin'ny fampahafantarana azy ireo.
Raha mankafy ny orinasanao izy ireo dia misy vintana mety hifanarahan'izy ireo koa. Marina indrindra izany raha samy manana ny fahalianany ianao na manana toetra mitovy.
Ataovy am-pahombiazana izany dia ho namorona faribolana sakaiza izay mahazaka kokoa ianao ary mety haharitra.
9. Mikendry ny finamanana izay misy fifandraisana lalina kokoa.
Misy karazana fisakaizana isan-karazany ary fomba iray lehibe iankinan'izy ireo ny haavon'ny fifandraisana akaiky ankehitriny.
Mora lavitra kokoa ny tonga ny namana tsy hita popoina noho ireo izay mahazo aina anao manokatra sy mizara ny eritreritrao maizina indrindra.
Raha tsy manana namana ianao izao, dia mety halaim-panahy ny hisafidy fifandraisana ambonimbony kokoa, izay mitondra risika vitsy kokoa ary mora kokoa / haingana kokoa ny miforona.
Ny finamanana manandanja indrindra anefa dia ireo vitsy izay miatrika ny fitsapana ny fotoana ary manatsara ny fiainanao amin'ny fomba lehibe.
Miezaha àry hamadika ny namana iray na roa ataonao ho sakaiza akaiky.
10. Aza mandeha manenjika namana.
Na dia tsy manana namana aza ianao ary mety hahatsapa ho manirery, zava-dehibe ny tsy hiezahanao mafy hanao olona namanao raha tsy misy fifandraisana marina eo.
Tsy mandeha mihitsy ny fanenjehana olona sy ny fanerena hanery azy ireo ho sakaiza.
Na dia tokony hanome fotoana be dia be anao aza ny olona hahitana raha misy ny mety amin'ny fifandraisana lalina izay vao noresahintsika, fantaro hoe rahoviana no hiantsoana azy hiala.
Somary toy ny mampiaraka izany raha tsy mahatsapa fa fifandraisana matotra (amin'ity tranga ity ny finamanana) dia eo amin'ny karatra rehefa afaka kelikely, tsy mila mahatsapa ho meloka ianao rehefa misaraka.
Amin'izao fotoana izao, rehefa mamaky ity ianao dia mety ho toa anao tsy misy namana tena izy ary tsy misy olona tia anao. Tsarovy fotsiny fa tsy tokony ho toy izao.
Manana ny hery ao anatinao ianao hananana finamanana vaovao ary hamorona tambajotran'olona olona tianao.
Mila fotoana sy fahatapahan-kevitra ny fananganana ireo fifamatoran'ny finamanana ireo, fa raha vao manana ianao, dia lehibe ny valiny.
Tsy fisian'ny namana manala anao? Te hiresaka amin'olona momba an'io? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka manampy anao hahatsapa ho tsara kokoa sy hanao fifandraisana vaovao. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana no fomba hahazoana namana rehefa olon-dehibe: Dingana lehibe 4 + Torohevitra 5
'Fa maninona no tsy tian'ny olona aho?' - Zavatra 16 Hitsaharana ny fanaovan-dratsy eo alohan'izay
Famantarana 17 fa olona misy poizina ianao (Fomba hahalala + ny fomba hijanonana)
tezitra ny lahy foana
zavatra mahafinaritra hatao ao an-trano irery